Notokanana ihany koa ny trano vaovaon'ny IUGM (Institut Universitaire de Gestion et Management), miaraka amin'ny fitaovana sy ny fanaka rehetra izay natao ho birao fiasan'ny talen'ny sampam-pampianarana sy ny mpampianatra ary ny mpandraharaha. Napetraka koa ny vatofototra ho an'ny « amphithéâtre » vaovao natokana hianarana.
Ho an'ny oniversiten'i Mahajanga, ny lalam-piofanana ho mpitsabo sisa no tsy mbola manomboka ny fampianarana.
Mbola olana goavana anefa ny resaka tranon'ny mpianatra satria tsy afaka ny hisitraka ny trano izy ireo amin'ity taom-pianarana ity noho ny fanamboarana ireo bloc tsy mbola vita. Efa nisy anefa ireo mpianatra izay niditra an-keriny amin'ny trano ny talata lasa teo. Andrasana ny fepetra ho raisin'ny mpitantana ny oniversite.